Akụkọ - Wzọ asatọ iji gbuo ngwụcha ngwụcha gị
8 8zọ na-egbu gị ọgwụgwụ Mill
1. Na-agba Ọsọ Ọsọ ma ọ bụ Jiri nwayọ
Chọpụta ezigbo ọsọ na nri maka ngwa ọrụ gị yana ọrụ nwere ike ịbụ usoro gbagwojuru anya, mana ịghọta ezigbo ọsọ (RPM) dị mkpa tupu ịmalite ịmalite igwe gị. Gba ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ike ibute oke mgbawa ma ọ bụ ọbụnadị ngwa ọrụ ọdachi. N'aka nke ọzọ, RPM dị ala nwere ike ibute ntụgharị, mmecha ọjọọ, ma ọ bụ belata ọnụego mwepụ igwe. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ezigbo RPM maka ọrụ gị bụ, kpọtụrụ ndị na-emepụta ngwa ọrụ.
2. Nri ya pere mpe ma ọ bụ buru oke ibu
Akụkụ ọzọ dị oke egwu nke ọsọ na ndepụta, ọnụego nri kachasị mma maka ọrụ dịgasị iche site na ụdị ngwa ọrụ na ihe eji arụ ọrụ. Ọ bụrụ n’ịji ngwa gị rụọ ngwa ngwa karịa ngwa ngwa, ị nwere ihe ọghọm nke ịgbanye ibe na ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa na-arụ ọrụ gị, ị nwere ike ịkpata mgbaji ngwa ọrụ. Nke a bụ eziokwu na obere ngwa ọrụ.
3. Iji Omenala Roughing
Ọ bụ ezie na ịmegbu ọdịnala na-adị mkpa mgbe ụfọdụ ma ọ bụ nke kachasị mma, ọ na-adịkarị ala karịa nnukwu arụmọrụ igwe (HEM). HEM bụ usoro na-adịghị mma nke na-eji obere Radial Depth of Cut (RDOC) na Axial Depth of Cut (ADOC). Nke a na-agbasa ọbụnadị na-agafe mbepụ, na-agbasa okpomọkụ, ma na-ebelata ohere nke ngwa ọrụ. Na mgbakwunye na ndụ ngwa ọrụ na-abawanye ụba, HEM nwekwara ike mepụta ọfụma ka mma na iwepụ igwe dị elu, na-eme ka ọ bụrụ nrụpụta arụmọrụ niile maka ụlọ ahịa gị.
4. Iji Ezigbo Ngwá Ọrụ Jide
Kwesịrị ekwesị na-agba ọsọ kwa nwere obere mmetụta na suboptimal ngwá ọrụ ijide ọnọdụ. Njikọ igwe-na-ngwa ọrụ na-adịghị mma nwere ike ibute ngwa ọrụ, nchapu, na akụkụ a kpụrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, isi ihe ndị ọzọ onye na-ejide ngwá ọrụ nwere na ngwa ọrụ ya, otú ahụ ka njikọ ahụ ga-enwe nchebe karị. Hydraulic na ịda mbà ndị ji ihe eji arụ ọrụ na-enye mmụba arụmọrụ karịa usoro mmechi igwe, dịka ụfọdụ mgbanwe ụfọdụ, dị ka Helical's ToughGRIP shanks na Haimer Safe-Lock ™.
5. Anaghị Eji Agbanwe Helix / Pitch Geometry
A atụmatụ na a dịgasị iche iche nke elu arụmọrụ ọgwụgwụ mills, agbanwe helix, ma ọ bụ agbanwe pitch, jiometrị bụ a aghụghọ mgbanwe ọkọlọtọ ọgwụgwụ na nkume igwe nri jiometrị. Njirimara geometrical a na-achota na oge etiti oge n'etiti imebi kọntaktị na workpiece dịgasị iche, karịa n'otu oge na ntụgharị ngwaọrụ ọ bụla. Mgbanwe a na-ebelata nkata site na ibelata nkwekọrịrị, nke na-abawanye ndụ ngwa ọrụ ma rụpụta nsonaazụ dị elu.
6. Chohọrọ mkpuchi na-ezighi ezi
N'agbanyeghi na o di oke onu ahia, akụrụngwa nwere mkpuchi kachasị maka ngwa ọrụ gị nwere ike ime ihe dị iche. Ọtụtụ ihe mkpuchi na-abawanye mmanu, na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa, ebe ndị ọzọ na-abawanye ike na nguzogide abrasion. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe mkpuchi niile na-adabara ihe niile, ihe dị iche na-apụtakwa ìhè na ihe na-enweghị ihe ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ihe mkpuchi Aluminium Titanium Nitride (AlTiN) na-eme ka ike sie ike na nguzogide okpomọkụ na ihe ndị na-eme ihe, ma nwee njikọ dị elu na aluminom, na-eme ka adhesion na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ịcha. Ihe mkpuchi Titanium Diboride (TiB2), n'aka nke ọzọ, nwere njikọ dị oke ala na aluminom, na-egbochi iwulite mbubata na mgbawa mgbawa, ma gbasaa ngwa ọrụ.
7. Iji Ogologo Ogologo Ngbutu
Ọ bụ ezie na ogologo ogologo nke ịkpụ (LOC) dị ezigbo mkpa maka ụfọdụ ọrụ, ọkachasị n'ịrụcha arụmọrụ, ọ na-ebelata ịdị ike na ike nke ngwa ngwa. Dịka iwu n'ozuzu, LOC ngwá ọrụ kwesịrị ịbụ naanị ogologo oge ọ dị mkpa iji hụ na ngwaọrụ ahụ na-ejigide ihe nke mbụ ya dị ka o kwere mee. Ogologo oge LOC bụ ihe nwere ike ịdaba na ya ọ ga-aghọ, na-ebelata ndụ ngwa ọrụ ya ma na-abawanye ohere nke mgbaji.
8. inghọrọ Flzọ Na-ezighị Ezi
Dị ka ọ dị mfe dịka ọ dị ka ọ dị, ọnụ ọgụgụ ọjà nke ngwa nwere mmetụta pụtara ìhè na ama ama na arụmọrụ ya yana usoro ya. Ngwaọrụ nwere obere ọjà (2 ruo 3) nwere ndagwurugwu ọjà buru ibu na isi pere mpe. Dị ka ọ dị na LOC, mkpụrụ pere mpe fọdụrụnụ na ngwa ọrụ ọkụ, ọ na-esighi ike ma dịkwa njọ. Ngwá ọrụ nwere ọnụ ọgụgụ dị elu (5 ma ọ bụ karịa) na-enwekarị isi buru ibu. Agbanyeghị, ọnụọgụ dị elu anaghị adị mma mgbe niile. A na-ejikarị ọnụ ọgụgụ ndị dị ala eme ihe na aluminom na ihe ndị na-enweghị ike, nwere obere n'ihi na ịdị nro nke ihe ndị a na-enye ohere ka enwekwu mgbanwe maka mmụba nke igwe na-abawanye, kamakwa n'ihi ngwongwo nke ibe ha. Ngwongwo ndi na-abughi ndi mmadu na-emeputa ogologo oge, ihe ndi ozo di egwu na onu ogugu di obere na-enyere aka belata ntughari mgbawa. Ngwá ọrụ ọnụ ọgụgụ dị elu na-adịkarị mkpa maka ihe ndị siri ike, ma maka ike ha na-arịwanye elu na n'ihi na mgbapụta mgbapụta adịghị enwe nchegbu n'ihi na ihe ndị a na-emepụta obere ibe.